अष्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत ३१ रनले विजयी
मंसिर २४ गत्ते । अष्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेट भारतले ३१ रनले जितेको छ । एडिलेडमा भारतले दिएको ३२३ रनको लक्ष्य पछ्याएको अष्ट्रेलिया २९१ रनमा समेटिएको थियो । पहिलो पारिमा २५० रन बनाएको भारतले अष्ट्रेलियालाई २३५ रनमा रोकेर दोस्रो पारि सुरु गरेको थियो
क्षीरेश्वरनाथ अन्तर वडा फुटबलको उपाधि वडा नंं ५ ले उचाल्यो
जनकपुरधाम, मंसिर २२ गते । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिमा सम्पन्न प्रथम अन्तर वडा कप नक आउट फुटबलको उपाधि वडा नम्बर ५ ले जितेको छ । क्षीरेश्वरनाथ स्पोर्टस क्लब महेन्द्र नगरको आयोजनामा भएको खेलमा वडा नम्बर ५ ले वडा नम्बर ३ लाई शुन्यका
ईपीएलपछि शक्ति गौचनले क्रिकेटको सबै फर्मबाट सन्यास लिने
मंसिर २१ गत्ते । गएको जुलाईमा नेदरल्यान्ड्समा भएको एक दिवसीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलबाट विदेशी भूमिमा आफ्नो खेलजीवन टुंग्याइसकेका शक्ति गौचनले शनिबारबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिगपछि सन्यास लिने भएका छन् । नेपालमा हुने अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलबाटै पूर्ण रूपमा सन्यास लिने चाहना राखेका शक्तिको यो चाहना क्यान निलम्बनमा
यौन शोषणको आरोपमा बलिउड गायक मिका सिंह दुबईमा पक्राउ
मंसिर २१ गत्ते । बलिउडका चर्चित गायक मिका सिंहलाई दुबईमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । मिका सिंहलाई एक किशोरीले यौन शोषणको आरोप लगाएकी छिन् । ब्राजिलकी १७ वर्षकी एक किशोरीले उनलाई यौन शोषणको आरोप लगाएकी हुन् । ती युवतीले मिकालाई अश्लिल तस्बिरहरु
टी–१० क्रिकेटःचौथो खेलमा लय लिन सकेनन् सन्दीप ,टिम केरला नाइटस् पञ्जाब लिजेन्डससँग ३६ रनले पराजित
मंसिर ११ गत्ते । यूएईमा जारी टी–१० क्रिकेटमा लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका सन्दीप लामिछानेले चौथो खेलमा लय लिन सकेनन् । उनले २ ओभरमा २८ रन खर्चिँदासमेत विकेट हात पार्न असफल भएका हुन् । सुरुका तीन खेलबाट ६ विकेट लिएका सन्दीप चौथो
कुस्ति सिकाउँदै नगरपालिका
जनकपुरधाम,मंसिर ९ गत्ते । चलनचल्तीको लोकप्रिय क्रिकेट, फुटबललगायत अन्य खेल संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि थुप्रैले लगानी गरिरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारकोसमेत यसप्रति चासो देखिन्छ । तर हराउँदो पौराणविक प्राचीनकालीन कुस्ति खेललाई जोगाउन कसैले चासो नदिँदा यहाँको एक नगरपालिकाले कुस्ति
शंकर माविले उचाले नकआउट फुटबलको उपाधि
विजय झा जनकपुरधाम, मंसिर ६ गते । धनुषाको सहिद नगरपालिकामा सम्पन नकआउट फुटबलको उपाधि शंकर माध्यमिक विद्यालय चक्करले उचालेको छ । कृष्ण युवा फुटबल क्लव सहिद नगरपालिका–५ को आयोजनामा सम्पन्न नकआउट फुटबलको फाइनलमा औरसाहा फुटबल टिमलाई १ का बिरुद्ध ४ गोल गरी शंकर माध्यमिक
सहिदनगरमा जारी नकआउट फुटबलको फाइनलमा औरसाहा
विजय झा मंसिर ३ गत्ते,जनकपुरधाम । धनुषाको सहिद नगरपालिकामा जारी नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफानलमा औरसाहा विजय भएको छ । कृष्ण युवा क्लब पचहर्वा, सहिद नगरपालिका ५ को आयोजनामा जारी फुटबल प्रतियोगित अन्र्तगत सोमबार जिल्ला फुटबल संघ धनुषाका अध्यक्ष सुरेश शर्माको प्रमुख
कार्तिक १३ गत्ते,जनकपुरधामा । इटहरीमा सोमबार सम्पन्न तेस्रो यू–१९ राष्ट्रिय इटहरी प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि प्रदेश २ टिमले जितेको छ । उसले आयोजक इटहरी क्रिकेट एकेडेमीलाई फाइनलमा १ सय १९ रन अन्तरले हराएको हो । विजेताले १ लाख ११ हजार र उपविजेताले
यसरी हुँदैछ बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विवाह
अविवाहित बलिउड स्टार्सको चर्चा चल्दा सलमान खानसँग प्रियंका चोपडाको नाम अगाडि आउथ्यो । प्रियंका चोपडाको त लभ अफेयरको चर्चा पनि सामसुम भइसकेको अवस्था थियो । धेरैले अनुमान गरेका थिए, अब प्रियंकाले घरजाम गर्ने छैनन् । तर, यस्ता अनुमानलाई लोप्पा ख्वाउँदै प्रियंकाले
आश्विन ३० गत्ते,सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा आयोजित वडा अध्यक्ष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी वडा नं. ६ ले जितेको छ । जित संगै वडा नं. ६ का टिमले ५१ हजार नगद एवं प्रथम शिल्ड प्राप्त गरेको छ । सोमबार सॉझ रानीगंजको खेल मैदानमा सम्पन्न
आफ्नो परिवार भनेपछि मरिहत्ते गर्ने बलिउड अभिनेत्रीमध्ये पर्छिन्— आलिया भट्ट  । आफ्ना दिदीहरू पूजा र शाहिनसँग उनको उत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध छ  । उनकी सहोदर दिदी शाहिनले केही वर्षअघि आफ्नो संघर्ष र डिप्रेसनबारे मुख खोलेकी थिइन् । उनले यति बेला त्यही अनुभवलाई पुस्तकाकारमा ल्याएकी छन्,
‘इएह छी हमर जनकपुर’ नामक चलचित्रमय प्रस्तूतिको लोकार्पण ।।
वडा दशैंको रौनक उत्कर्षमा पुगी रहेको वेला शुक्रवार भव्य समारोह बीच ‘ इएह छी हमर जनकपुर ’ नामक चलचित्रमय प्रस्तूतिको लोकार्पण गरिएको छ । जनकपुरधामको इतिहास, भूगोल, धर्म–कर्म, भाषा–साहित्य, कला–संस्कृति, रिती–रिवाज लगायतका पुरातन तथा रेल, चुरोट कारखाना, रामानन्द प्रवेशद्वार सहितका आधुनिक
आश्विन २४ गत्ते,काठमाडौं । सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एसिया छनोट प्रतियोगितामा नेपालले चीनलाई १० विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। चीनले दिएको २७ रनको लक्ष्य नेपालले १।५ ओभरमा विनाविकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो। नेपालका लागि ८ बलमा नटआउट २४
आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोटःमलेसियाविरुद्ध नेपालको शानदार जित
आश्विन २० गत्ते । आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत एसिया उपक्षेत्रीय छनोटको नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । शनिबार भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । यसअघि पनि नेपालले मलेसियालाई ८ विकेटले नै पराजित गरेको थियो । मलेसियाको बायुमास
बंगबन्धु गोल्डकपःनेपाल ताजिकिस्तानको आमनासामना
आश्विन १६ गत्ते,जनकपुरधाम । बंगबन्धु गोल्डकपको नयाँ संस्करण आजदेखि बंगलादेशमा सुरु हुँदैछ । साविक विजेता नेपालले उदघाटन खेलमा मंगलबार ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बंगलादेशको सिलेट डिस्ट्रिक्ट रंगशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार सवा ६ बजेदेखि सुरु हुनेछ । सन् २०१६ मा भएको प्रतियोगिताको चौथो संस्करणमा
एसिया कपःबंगालदेशले पाकिस्तानलाई ३७ रनले हरायो, फाइनलमा भारतसँग खेल्ने
आश्विन ११ गत्ते । एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्ने भएका छन् । बुधबार रातिको खेलमा पाकिस्तानलाई ३७ रनले पराजित गर्दै बंगालदेशले भारतसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो । पहिला ब्याटिङ गरेको बंगलादेशका लागि मुस्फिकुर रहीमले ९९ तथा मोहम्मद मिथुनले
एसिया कप क्रिकेटःअफगानिस्तानसँग बराबरीमा रोकियो भारत
आश्विन १० गत्ते । एसिया कप क्रिकेटको सुपर फोर अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा भारत र अफगानिस्तान बराबरमा रोकिएका छन् । पहिला ब्याटिङ गर्दै अफगानिस्तानले भारतलाई २५३ रनको लक्ष्य दिएको थियो । अफगानिस्तानका मोहम्मद शहजादले १२४ तथा मोहम्मद नबीको ६४ रनको मद्दतले अफगानिस्तानले निर्धारित
अश्विन २ गत्ते । एसिया कप क्रिकेटमा पाँच पटकको च्याम्पियन श्रीलंकाले दोस्रो हार ब्यहोरेको छ । सोमबार राति भएको खेलमा कान्छो टेस्ट राष्ट्र अफगानिस्तानसँग ९१ रनले पराजित भएसँगै श्रीलंका एसिया कपको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना सकिएको छ । पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग १३७ रनले
एसिया कपमा पाकिस्तानको विजयी सुरुवात, हङकङ ८ विकेटले पराजित
आश्विन १ गत्ते । युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटमा हङकङलाई पराजित गर्दै टेष्ट नेशन राष्ट्र पाकिस्तानले विजयी सुरुवात गरेको छ । दुबई अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा पाकिस्तानले हङकङलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । हङकङले दिएको ११७ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले २३.४ ओभरमा २